Yonke into Malunga namanyathelo obuso azenzele wona - Ulusu
Okunye Ukutya Iindaba Zefashoni Ukuhombisa Buza Ingcali Iincwadi Itekhnoloji Iimveliso Amanqaku Omfazi Ombane Imikhwa
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nobuso obuzenzele
Thina mantombazana sihlawuliswa irhafu ngendlela yokunyamekela ulusu lwethu. Ukusuka kwizithambisi ezithembisa ukungabinayo ikhemikhali kwii-facial ezithembisa ukukunika ukonyusa ioksijini, mhlawumbi wenze konke okusemandleni akho ukuthoba ulusu lwakho. Kodwa ukhe wazama ukwenza ubuso obenziwe ekhaya?
Ngoku ngaphambi kokuba ucinge ukuba kunzima kakhulu, masixelele, ubuso obuzenzekelayo yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa ukuba unika ulusu lwakho izakhamzimba ezifanelekileyo ngaphandle kokusebenzisa imichiza eyongeziweyo. Kodwa ngaphambi kokuba siqale ngokukuxelela malunga neemaski kunye nokukhuhla onokuzenza ekhayeni lakho, masikuxelele ngezinto ezithile ezisisiseko ekufuneka uzenzile ukulungiselela ulusu lwakho ebusweni.
1. Coca ulusu lwakho
3. Ukukhuhla okwenziwe ekhaya
Zine. Iipakethe zobuso
5. Ii-FAQ kubuso obuZenzele
Coca ulusu lwakho
Nayiphi na igumbi elifanelekileyo liya kuhlala licoca ubuso bakho ngaphambi kokuba uqalise nabuphi na ubuso. Yiyo loo nto, nokuba kuziwa ebusweni, ukucoca ubuso bakho yeyona nto iphambili. Kwaye ukuba unayo imake-up yakho, emva koko iba yinto ebaluleke kakhulu ukuyisusa ngokupheleleyo ngaphambi kokuqala unyango.
Ingcebiso: Susa onke amabala emilebe ukuze uqiniseke ukuba ubuso bakho obenziwe ekhaya bukunika ukukhanya okumangalisayo.
Ngoku ubuso bakho bucocekile, lixesha lokuba ubhebhetheke. Ukuthunga kuya kuvala ii-pores kwaye kuvulekele inkqubo elandelayo yokukhuhla. Ukuba awunayo i-steamer ekhaya, vele ubilise amanzi kwisitya. Thatha isitya phezu kwetafile kwaye ugcine ubuso bakho ngaphezulu. Sebenzisa itawuli ukugquma intloko kunye nomlomo wenqanawa ukuze umphunga ugxile ebusweni bakho.
Soloko uqinisekisa ukuba umphunga ukude. Sukusondela kufutshane nomphunga okanye umlomo wenqanawa njengoko inokubutshisa ubuso bakho. Umphunga ubuso bakho imizuzu elishumi elungileyo. Ukuba ubuso bakho bomile okanye buthathaka, qhubeka ngononophelo. Unokufaka isicelo amafutha okuthambisa ebusweni bakho ngelixa uyipheka ukuqinisekisa ukuba ulusu lwakho lukhuselekile.
Ingcebiso: Unokongeza ioyile ye-eucalyptus okanye nayiphi na ioyile yevumba emanzini emva kokuba ugqibile ukuyibilisa.
Ukukhuhla okwenziwe ekhaya
Ukukhuhla yinkqubo elandelayo elandela ukubila. Uluvo apha kukususa zonke iiseli ezifileyo ezivale ubuso bakho kunye nokuphucula ukuthamba kolusu lwakho. Xa uhlikihla, intshukumo yesandla sakho kufuneka ihlale ingekho mpumlweni. Ke xa uhlikihla izidlele zakho, susa isandla sakho ukusuka embindini wempumlo uye ezindlebeni zakho.
Ungasebenzisa izinto ezahlukeneyo kwifayile ye- Ukukhuhla ekhaya . Eyona nto ithandwa ngoku bubusi, ikofu eyakhiwe, ivithamin E oyile kunye neswekile emdaka. Ungayigcina yomile okanye ungongeza ioyile yekhokhonathi kwaye uyixube ide ikwimo yokuncamathisela. Faka isicelo ngokukhululekileyo ebusweni bakho. Khuhla ubuso bakho okomzuzu okanye emibini. Emva koko yihlambe ngamanzi. Ukuba ubeke ioyile eninzi kwisikhukula sakho, sebenzisa isepha ethambileyo ukucoca intsalela yeoyile ebusweni bakho.
Ingcebiso: Unokwenza okungaphezulu kokukhuhla kwaye uyisebenzise njengepolishi yomzimba wakho.
Ngoku ubuso bakho bulungele ukufaka ifayile ye- ipakethe yobuso . Kukho iipakethe ezahlukeneyo onokuzijonga ngokuxhomekeke kwiimfuno zesikhumba sakho. Ukuba unesikhumba esomileyo, ipakethi eya kuthi inike ukufuma kulusu lwakho iya kuba luncedo. Ukuba unayo isikhumba esithandwa ngamabala , emva koko izithako ezinokulwa namabala ziya kuba luncedo ekubeni nolusu olucacileyo.
ialoe vera iluncedo ekulweni zonke iintlobo zezifo zolusu ezifana namabala, amabala, nangokhwekhwe. Ayisiyiyo kuphela iphucula ukuqina kwesikhumba kodwa iya kwenza nolusu lwakho luthambe kwaye lube lula. Into oyifunayo yicephe eli-1 le-Aloe Vera, ½ icephe lejusi yekhukhamba kunye ½ icephe leyogathi. Hlanganisa ezi zintathu uze uzisebenzise ebusweni bakho.
Ioyile yeCoconut isetyenziswa kwiimveliso ezininzi zezithambiso. Inomxholo ophezulu weVitamin E kunye nee-acid ezinamafutha anika ulusu lwakho ukonyusa ukufuma. Ke ukuba unengxaki yolusu olomileyo, le pack yeyakho. Xuba 1 icephe yeoyile yekhokhonathi kunye ½ icephe lobusi kwaye uthambise ebusweni bakho.
Ioyile yomthi weti ilungele ukulwa namabala namabala . Amaconsi ambalwa ahamba indlela ende xa esenza lo mxube. Dibanisa icephe eli-1 lobusi, icephe eli-1 leyogathi kunye namaconsi ama-5 eoyile yomthi weti kwaye uthambise ebusweni bakho.
Ingcebiso: Soloko ususa iimaski mzuzu zisoma. Ungasusa ngobunono usebenzisa isiponji esimanzi okanye ilaphu. Ungalibali ukuthambisa ubuso bakho ebusweni.
Ii-FAQ kubuso obuZenzele
Q. Kukangaphi kufuneka wenze ubuso obenziwe ekhaya?
UKUYA. Kuxhomekeka kwizithako ozisebenzisayo kwimask kunye nokukhuhla. Ukuba izithako zinzima kakhulu (njengekhofi esekwe emhlabeni) okanye yomelele kulusu lwakho, emva koko kufuneka ikuncede kanye kwiiveki ezimbini. Ukuba usebenzisa izikhuhluzi ezinobulali kunye nokuthantamisa, unokuyenza kabini ngeveki. Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele yimeko yesikhumba sakho. Ke ulumke kwaye uqhubeke ngononophelo.
Q. Ndiphume amabala! Yeyiphi imaski okanye isikhuhluzi endifanele ukusisebenzisa?
UKUYA. Kuba induna enamandla , Kuya kufuneka ubonane nogqirha wesikhumba njengoko kukho izizathu ezininzi zokuba unale meko. Kungaba yihomoni, ulusu, njl., Okona kulungileyo ukuba kuhlolwe ngaphambi kokwenza into ngokwakho. Nangona kunjalo, ukuba akukho nto imbi kangako, ukusebenzisa umthi weti njengesixhobo esisebenzayo kwimaski yakho kuya kukunceda ukuba ulwe ne-acne. Ngapha koko, unokufaka nje amachaphaza eoyile yomthi weti kwiindawo ezinesifo kwaye ugcine ubusuku bonke. Ngentsasa, i-acne yakho iqinisekile ukuba yehliswe ngesixa esikhulu.
Q. Nguwuphi umahluko phakathi kobuso obenziwe ekhaya kunye neparlor yobuso?
UKUYA. Kukho izinto ezininzi ekufuneka ujonge kuzo xa uthelekisa ezi zimbini. Ngobuso obenziwe ekhaya, kufuneka wenze yonke into ngokwakho ngelixa abantu bekwenzela yona. Unolawulo ngakumbi kwizithako ezisetyenzisiweyo xa usenza ngokwakho xa kuthelekiswa naxa usenza kwindawo yokuphumla. Kufuneka wazi nje ukuba ukhululekile kwaye ulungele kangakanani ukutyala imali ebusweni.
Q. Zikhona izixhobo esinokuzisebenzisa ekhaya kubuso bethu?
UKUYA. Kukho iibrashi ezizenzekelayo kunye neemasager ezikhoyo kwintengiso yobuso bakho. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ugcine izinto ezimbalwa engqondweni ngaphambi kokuthenga iseti okanye ibrashi enye. Kuya kufuneka ujonge ukuthamba kunye nokuqina kweebristles kunye nesantya apho ii-bristles zijikeleza khona.
Njalo, qiniseka ukuba ufaka uxinzelelo oluncinci ngelixa usebenzisa ibrashi ezenzekelayo, nokuba ngaba ibristles ithambile. Ulusu lobuso lubuthathaka kakhulu, kwaye kuya kufuneka ulumke ngezixhobo ozisebenzisayo. Unokufumana ukuphuma okumbalwa xa uqala ukusebenzisa isixhobo. Kukho uphononongo oluxubekileyo koku.
Bambalwa abathi oku kuqhelekile kwaye ulusu lwakho luya kucoca ngokusetyenziswa ngokuqhubekayo ngelixa abanye benoluvo lokuba kuya kufuneka uyeke iibrashi ukuba oku kuyenzeka. Ungahlala ujonga ugqirha wakho wesikhumba ukuba ukusebenzisa ezi zixhobo zilungile kulusu lwakho.
Izigaba Ubuhle Bomtshato Okunye Ukuhla Ukusinda
Eyona ndawo ilungileyo yokuthambisa ubuso kolusu olomileyo, olubuthathaka
Unyango lwasekhaya lokukhula kweenwele zepcos
isixhobo sokulungisa iinwele esineenwele
indlela yokulawula iinwele eziwayo
ifashoni kwintombazana emfutshane